Myanmar Health Updates Journal | မှတ်သားဖွယ်
ကလေးများသည် ဘီယာအမှတ်တံဆိပ်များနှင့် အကျွမ်းတ၀င်ရှိနေခြင်း
Health Updates Journal No. 157 လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ ကျောင်း နေကလေးများသည် ဘီစကစ်နှင့် ...
လမစေ့မီ သန္ဓေသားဖွံ့ ဖြိုးမှုနှေးသောအခြေအနေတွင်
Health Updates Journal No.161 ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သန္ဓေသား ဖွံ့ဖြိုးမှု နှေးသောအခြေအနေ (Fetal Growth ...
ဆေးထိုးရာတွင် မနာကျင်စေမည့် နည်းလမ်းသစ်
Health Updates Journal No. 166 Comfortably Numb ဟု အမည်ပေးထားသည့် ဆေးထိုးစနစ် သည် ...
Health Updates Journal No. 171 သုတေသန အသစ်တစ်ရပ် အရ တချို့သောဆူညံသံများကို ကြားရသည့်အခါ ...
ငယ်ရွယ်စဉ် အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းနှင့် ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်း ရောဂါ
Health Updates Journal No. 176 လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ ငယ် ရွယ်စဉ်ကလေးဘ၀တွင် အနိုင်ကျင့် ခံရပါက ...
Health Updates Journal No. 212 ဆရာဝန်တွေကလူ ၁ ယောက် ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အင်ဆူလင်ဘယ် လောက်ကျန်သေးလဲဆိုတာကို အတိ အကျ သိလိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလူ မသေမချင်း အဲဒီမုန့်ချိုအိတ် ကို ဖြတ်ထုတ်ပြီး မစစ်နိုင်မခြင်း၊ ဝေဒနာရှင်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အင်ဆူလင် ...
Health Updates Journal No. 212 ၁။ ရင်သားကင်ဆာကို သက်သာ ကောင်းမွန်စေခြင်း American Physcian Dr.Zane Kime သူ့ရဲ့ ကင်ဆာ လူနာတွေကို နေပူဆာလှုံ့ခြင်းနဲ့ ဓာတ်စာတွေကျွေးပြီး ကုသရာမှ ကင်ဆာပြန့်ပွားခြင်းကို ရပ်တန့်ပစ် နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၂။ မကောင်းတဲ့ ...
Health Updates Journal No. 211 ပတ်ဝန်းကျင် အနေအထား ပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ပူခြင်း၊ အေး ခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ စွတ်စိုခြင်း စတာတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ သာမန်အဖျားရောဂါကို ဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်(စ်) ဖျားစေတဲ့ဗိုင်းရပ်(စ်) အမျိုး အစားပေါင်း မြောက်များစွာ ရှိပါ ...
Health Updates Journal No. 211 လေဖြတ်ခြင်းကို နာရီလက်တံ အား ၁ နာရီ ရှေ့တိုးခြင်း သို့မဟုတ် နောက်ဆုတ်လိုက်ခြင်းဖြင့် အန္တရာယ် ပိုများစေနိုင်သည်ဟုသော တွေ့ရှိ ချက်ကို ဖင်လန်နိုင်ငံတာခူး တက္က သိုလ်မှ သုတေသနအဖွဲ့က အံ့အား သင့်ဖွယ် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ လေဖြတ် ...
Health Updates Journal No. 211 လုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ မိမိ တို့ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ကျန်းမာရေး နှင့်မကိုက်ညီသော စံနှုန်းအတွင်းရှိ ၀န်ထမ်းမျာက ၎င်းင်းတို့အနေနှင့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်စေရန် အတွက် လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာသန် စွမ်းမှုအစီအစဉ်များ ...
မျိုးရိုးလိုက် နှလုံးရောဂါတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူရှာဖွေနိုင်မယ့်သွေးစစ်နည်းအသစ် ကမ္ဘာနဲ့အ၀န်းမှာ မျိုးရိုးလိုက် နှလုံးရောဂါ ခံစားနေရတဲ့သူတွေထောင်ပေါင်းများစွာရှိနေပါတယ်။ ယင်းရောဂါကအသက်အရွယ်မရွေး၊ အသက်အန္တရယ်ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ...
Health Updates Journal No. 210 အများစုသိထားကြတဲ့အတိုင်း မိခင်နို့ကမွေးကင်းစတွေအတွက်လိုအပ်တာထက်ပိုလျံတဲ့ပမာဏကိုပေးနိုင်ပေမယ့်ကမ္ဘာပေါ်မှာကလေး တိုင်းအတွက်တော့ ယင်းအယူအဆ က တူချင်မှတူနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့သုတေသနအသစ်တစ်ခုကဆိုခဲ့ပါတယ်။ American Journal of ...
ဘာလို့တစ်ချို့တွေကကိုယ်ထက်အများကြီးပိုစားပေမယ့် ကိုယ့်လို မ၀လာတာလဲ၊
Health Updates Journal No. 210 ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်တိုးတာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ မျိုးရိုးဗီဇ အဓိကကျပေမယ့်၊ မျိုးရိုးဗီဇကိုဖယ် ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တောင်တစ်ချို့တစ်ချို့တွေကအလွယ်တကူကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာတတ်ကြပြီး ...
သက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်တဲ့ လိင်မှုဘ၀က အရေးကြီး
ံHealth Updates Journal No. 210 ဗြိတိန်ရှိConventryUniversity က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့သုတေသနတစ်ခုမှာအသက် ၅၀ အထက်လူကြီးတွေအနေနဲ့မိမိကြင်သူသက်ထားနဲ့အိပ်ခန်း တွင်းအမှုကိစ္စတွေမှာတက်တက်ကြွကြွရှိနေတုန်းပဲဆိုရင်မှတ်ဥာဏ်အရည်အသွေး ...
Health Updates Journal No. 210 ဆားလွန်ကဲစွာစားသုံးခြင်း သည်သွေးတိုးရောဂါဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း သိရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ ယခုအခါသွေးတိုးခြင်းသာမကအသည်း ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းကိုလူကြီးများနှင့်ကြီးထွားဆဲလ်သန္ဓေသားလောင်း အပေါ်တွင်လည်း ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း ...